Isamborana valala ny lay : mirongatra ny tazo ao Sakaraha | NewsMada
Isamborana valala ny lay : mirongatra ny tazo ao Sakaraha
Par Taratra sur 17/03/2016
Mirongatra ny aretina tazo ao amin’ny distrikan’i Sakaraha, araka ny tatitra nataon’ny tomponandraikitra ao amin’ny CHD1 ao an-toerana, Rambolatiana Miriame Annie, ny faran’ny herinandro teo. Nandritra ny volana febroary lasa teo, 56 ny isan’ny olona tonga nanatona ny hopitaly vokatry ny aretina tazo sy nahazo fitsaboana. Telo no maty tao anatin’ny roa volana janoary sy febroary. Zaza 8 taona ny voalohany tany amin’ny fokontany Andranotsara, kaominina Andranolava. 11 volana ny zaza faharoa namoy ny ainy ny 3 febroary tao Betela, ao Sakaraha an-tampon-tanàna ihany. Ankizy 5 taona ny maty farany ny 12 febroary lasa teo, tao Andasy ao amin’ny kaominina ambonivohitra Sakaraha koa. Amin’ireo 56 niditra hopitaly, ankizy ny ankamaroany ary betsaka ny manao fanintona ary tsy mandaitra intsony ny fanafody ampiasaina sady efa reraka ilay zaza vao entina eny amin’ny hopitaly. Nanomboka ny volana mey 2015 noho mankaty no tena niseho ny aretina tazo tao anatin’ny distrika. Nahazoana ireo antontanisa ny marary manatona ny hopitaly ihany fa misy ny manatona ny CSB sy ireo tsy mitondra ny marary eny amin’ny tobim-pahasalamana. « Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Haruna no hita fa tena nirongatra ny aretina tazo », hoy ny fanazavany ihany. Antony koa ny tsy fampiasan’ny olona ny lay misy fanafody fa hisamboarna valala atao laoka na hamidy havadika vola. Mbola nanamafy ny fahamaroan’ny olona voan’ny aretina tazo rahateo ny dokotera lehiban’ny CHD1, Rahamelosoa Lanto. Izao volana marsa izao vao nidina ny marary tonga ao amin’ny hopitaly araka ny nambarany.
Ankoatra izay, tsy manana milina mpamokatra angovo koa ny hopitaly ka miandry ny fiverenan’ny jiro fotsiny rehefa misy ny fahatapahana. Tapaka koa ny rano raha vao mijanona ny famatsiana jiro. Manangon-drano ny mpiasan’ny hopitaly hiatrehana ny hamehana ilana rano.
Hahazo toeram-pandidiana ny distrika
Alefa any Toliara ny fandidiana raha misy ilana izany fa tsy mbola manana toeram-pandidiana ny distrika. Efa nilaza ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Andriamanarivo Mamy Lalatiana fa hantsangana tsy ho ela io fotodrafitrasa fandidiana io hanala fahasahiranana ny vahoakan’i Sakaraha sy ny manodidina.
Nandritra ny fanombohana ny herinandron’ny vaksiny fiarovana amin’ny aretina poliomelita tany Sakaraha, nanambara ny solontenan’ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS), Charlotte Ndiaye fa hampitomboana ny lay hozaraina iarovana amin’ny moka. Paikady isorohana ny tsimokaretina Zika eto amintsika izany. Misy koa ny fiomanana efa natao amin’ny mety ho fiavian’ny aretina eto amintsika.